A cameo anoita danho rakakura
Mune fenicha kana makabati kugadzirwa, chaizvo Hardware fittings inobata mutengo wayo chete kutenderedza 5% -10%. Asi kumira kana kudonha kwemhando yefenicha kana makabati, iyo inonzwisisika manzwiro ndeye kutsetseka kwemasiraidhi edhirowa, kabati remagetsi switch uye ingave yakanyarara, yega yega basa chidimbu ingave munhu n ...
Nzira yekusarudza chaiyo yakavanzika dhirowa masiraidhi?
Vamwe vatengi vakandibvunza kuti ndosarudza sei chaiyo yekudzikisa dhirowa slide? Nhasi ndichaunza ndedzipi mhando dzinodzikisira dhirowa rauinaro. Geriss Hardware ine mamwe marudzi akasarudzika emadhirowa akavanzika. Nezve iwo ruzivo iwe aunogona kushanyira pa https: //www.yangli-sh.co ...
Nekuvandudzwa kwenguva, vanhu vane dzakakwirira uye dzakakwirira zvinodiwa kumakicheni makabati. Iyo seti yekanaka kicheni kabati, Hardware yakakosha chikamu. GERISS HARDWARE inyanzvi yeChinese inogadzira kicheni kabati Hardware. Nhasi tichataura nezvekuti sei iwe shou ...
Bazi rekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza rakateedzera zviri pamutemo zvimiro zvitsva zvekuchengetedza nharaunda zvemidziyo
Musi waFebruary 1, Bazi rezvekudzivirirwa kwezvakatipoteredza rakaburitsa "hunyanzvi zvinodiwa zvemazita ekunyora zvigadzirwa fenicha (HJ 2547-2016)" yakaitwa zviri pamutemo, uye iyo "technical zvinodiwa fenicha yezvigadzirwa zvekunyorera zvakatipoteredza" (HJ / T 303-2006 ...
Maitiro Ekusarudza Akanaka Bhora Kutakura Dhirowa Slide
Munguva pfupi yapfuura, dzimwe shamwari dzekushongedza pamba, dzakandikumbira kutenga zvigadzirwa zvemidziyo kuti utarise kune izvo zvinhu. Iye zvino ndinogovana ruzivo rwangu newe: sarudzo yebhora rinotakura masiraidhi inogona kunge iri kuburikidza nemiedzo inotevera yekusarudza iri nani simbi telescopic chiteshi: 1. ...
Dhirowa Slide Gomo Rudzi Sarudza kana iwe uchida yeparutivi-gomo, yepakati kukwira kana kudzikisira masiraidhi. Kuwanda kwenzvimbo pakati pebhokisi rako redhirowa uye kuvhurwa kwekabineti kunokanganisa sarudzo yako. Side-makomo masiraidhi anotengeswa ari maviri kana seti, aine slide inonamira kune yega mativi edhirowa. Inowanikwa ...